News 18 Nepal || जन्मदिनमा माल्दिभ्स् पुगेर प्रियंका कार्कीको रोमान्स (फोटो फिचर)
जन्मदिनमा माल्दिभ्स् पुगेर प्रियंका कार्कीको रोमान्स (फोटो फिचर)
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले हिजो भब्य रुपमा आफ्नो जन्मदिन र ‘म्यारिज एनिभर्सरी’ एकै साथ मनाएकी छन् । प्रियंका आफ्नो जन्म दिन मनाउनका लागि श्रीमान तथा अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी माल्दिभ्स पुगेका छन् । एक वर्ष अघि आजकै दिन बिवाह बन्धनमा बाँधिएका प्रियंका र आयुष्मानले यो साल माल्दिभ्स् पुगेका हुन् ।
उनीहरु एक अर्कासँग प्रेम साट्दै जन्मदिन मनाएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि थाहा भएको हो । गतबर्षको फागुण १६ गते बैबाहिक जीवनमा बाँधिएका प्रियंका र आयुष्मानले हनिमुन मनाउने मौका पाएका थिएनन् । किनभने विवाह भएको महिना दिन नवित्दै कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएको थियो । लकडाउनका कारण उनीहरुले हनिमुन कहिले भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेका थिएनन् ।
लकडाउन खुलेसँगै जनजिवन सामान्य बन्न थालेपछि उनीहरु माल्दिभ्स् पुगेका हुन् । प्रियंकाले माल्दिभ्स् पुग्नुलाई सरप्राइजका रुपमा लिएकी छन् । उनले आयुष्मानलाई जन्मदिन र एनिभर्सरीमा यति ठूलो खुशी दिएको भन्दै धन्यवाद दिएकी छिन् । उनीहरु दुवैजना समुन्द्र सहतमा निकै रोमान्स गरेका तस्विहरु सोशल मिडियामा छाइरहेका छन् ।
एक समय यो जोडीले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा नै उभ्याएका थिए । तर, विस्तारै फिल्म क्षेत्रमा उनीहरुको क्रेज घटेको देखिन्छ । प्रियंका अभिनित गत महिना रिलिज भएको फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ सुपर फ्लप भयो । यो फिल्म नचल्नुमा निर्माण पक्ष नै दोषि रहेको हल्ला चल्दै आएको छ । फिल्ममा प्रियंका र आयुष्मानको क्रेज खस्किए पछि सामाजिक संजालमा भने बढ्दो क्रममा नै रहेको छ ।
सौन्दर्य प्रतियोगितामा भयो झगडा, विजेता भइन् घाइते
दीपाश्रीको फेसबुक ह्याक गरेको आरोपमा १४ वर्षीय बालक समातिए
दीपाश्रीको फेसबुक ह्याक, ह्याकरले मागे एक लाख
विभेद विरुद्ध गायक राज सागरले ल्याए ‘ए… मान्छे’ बाेलकाे गीत
२ वर्षदेखि प्रेममा इन्दिरा, को हुन् प्रेमी ?
कोमल वलीले रघुजी पन्तविरुद्ध हालेको मुद्धा के हुन्छ ?
‘राजनीतिमा आरोप, प्रत्यारोप अनि व्यक्तिगत लाञ्छना किन लगाइन्छ ?’